Angaphumelela yini omunye ummese emthwalweni indiza ukubeka?
Kuze kube manje, le ndiza kungaba kakade ashiwo esigabeni kwezithuthi zomphakathi. Amakhulu ezinkulungwane zabantu nsuku zonke ukwenza air travel, kokubili ngaphakathi ezweni kanye nasemhlabeni wonke. Futhi-ke, ukuhamba yonke athenge izinto eziyizikhumbuzo kuleli zwe impi noma, kunalokho, bekhulisa zonke izinhlobo okukhona. Phakathi izinto avame awela isigaba eziyisikhumbuzo noma izipho, imimese kukhona ngetakhiwo letehlukene kakhulu. Ukuze ugweme kokuhlupheka lapho flying, kubalulekile ngokwanele ukwazi imithetho empahleni. Ikakhulukazi, akubona bonke uyazi ukuthi ummese e umthwalo phezu indiza indawo. Ulwazi mayelana umehluko wemisindo nemiqondo yamagama anjalo futhi ukunquma ezingeni wenduduzo ngesikhathi evakashele. Phela, akekho kuyoba nice ukuboshwa ngenxa yokwephula izimo imithwalo ukuthi kungaholela ukubambezeleka ukubaleka kwenu noma inhlawulo esindayo.
Izidingo Jikelele semithwalo
Regulations air zokuthutha liyasho ukuthi iyiphi umgibeli unelungelo ukuthatha imithwalo ezokwenza uyiswe mahhala, ngombandela wokuthi isisindo ingeqi imikhawulo kuvunyelwe. Lesi sibalo ingase yehluke kuye ngesistimu yendiza kanye nohlobo izindiza. ngamunye umthwalo umgibeli senziwa ngamunye kuso.
Ezamukelwe kuyinsakavukela wemithwalo ngaphandle kwemali extra iyindawo 1st, okungukuthi, umgibeli ngamunye unelungelo ukuze nginikeze emthwalweni akuyona ipotimende angaphezu kwelilodwa. Kulokhu, kuyinsakavukela yesisindo sayo zingahluka:
abantu ukuhamba kwezamabhizinisi ekilasini, le ovumelekile isisindo umkhawulo - 32 kg;
ekilasini umnotho - 23 kg.
Uma lokhu kuyinsakavukela weqiwe, ne umgibeli lizokhokhiswa imali eyengeziwe.
It is okuhlongozwe ukuthi izingane ezincane kungaba abagibeli. Uma fly ingane eneminyaka engaphansi kwengu-2 ubudala, futhi abeke ukuthutha imithwalo, isisindo okuyinto akufanele idlule 10 kg. Lokhu kusebenza futhi nakulabo izingane ezingenziwanga ethenga indawo ehlukile, kungakhathaliseki ekilasini ikhambo.
Endabeni efanayo, lapho ingane ithikithi ahlukene, imithetho evamile asebenza umgibeli traffic kuso. Uma eminyakeni yobudala yomntwana kusukela eminyakeni emi-2 kuya ku-12 - impahla yakhe nesabelo ngeke lingafani omdala.
Izinto vala ukuthutha e izindiza
Kukhona ezinye ukulinganiselwa izifundo ezingaba uyiswe ku endizeni. Lezi ngokuyinhloko zihlanganisa:
iziqhumane kunoma yimuphi kanye nobungako;
uketshezi oluvutha kalula;
amagesi onomfutho futhi uketshezi;
ukudla okuqinile oluvuthayo;
izinto ezinobuthi kanye enemisebe;
esinoshevu, esinobuthi caustic kanye ezonakalisayo izinto;
izikhali kwanoma yiluphi uhlobo kanye nosayizi.
Njengoba ubona, impendulo eqondile embuzweni ukuthi kungenzeka ukuthi ashushumbise ummese isemithwalweni indiza, akukho. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi okuningi kuncike hlobo ummese, noma kunalokho, blade yakhe.
Ukwahlukanisa imimese efana imithwalo ehlukahlukene
Abantu abaningi, ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, thatha nawe ku ummese indiza. Lokhu kungaba ekhishini izinto uthenge esihlalweni, noma isikhumbuzo, okuyinto wathenga abangane. Ukuba umnini wayo, kubalulekile ukwazi kusengaphambili ukuthi kungenzeka ukuthi ashushumbise ummese isemithwalweni indiza. Ngemva kokudlulisa izinto kungavunyelwe ukuthutha, kungenzeka, nge veryatnostyu omkhulu, zinkinga ezinkulu.
Futhi-ke, ukuze ugweme ababhekene nanoma iyiphi inkathazo, kufanele wazi ukuthi nakuba umthetho kungavunyelwa ukudlula ummese emthwalweni wakho indiza, kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ezihlukahlukene leli qiniso. Isibonelo, akuvunyelwe ukuba nawe phakathi izinto bangeniswa endlwaneni eyakhiwe. Ayikho izinto ezicijile awavunyelwe sife-on umthwalo. Lokhu kusebenza nail nozhnichek ngisho izinaliti ngoba umjovo. Ngesikhathi esifanayo, it is hhayi kungavunyelwe ummese e wemithwalo yami bahlola indiza, inqobo kobukhulu kanye nobude ikhaba akasivumeli ukuba bathi lokhu kuncike izingalo.
Ukuze afeze ngommese e endlwaneni eyakhiwe izindiza kungenzeka ezimweni ezehlukile. Le mvume nhlobo ngokuzikhethela abasebenzi sezindiza. Lezi izimo isehlane ingasho nje ukusonga futhi penknives, blade ubude ezingaphansi kwezingu-6 cm. Nokho, ukuze sigweme izinkinga futhi ukubambezeleka ngesikhathi sokuhlolwa, kungcono, futhi lolu hlobo imimese nazo afakwe kwemithwalo. Lokhu obuphelele blade ngeke kubangele izinkinga uma ngabe sinquma ukuthi kungenzeka ukuba baphathe ummese isemithwalweni indiza.
Lokho kwenziwa kuphela semithwalo
Ivunyelwe ukugibela indiza e okulandelayo izinhlobo imimese, ngaphansi kombandela wokuthi siyofakwa kwemithwalo:
yasendlini futhi foldable, ngensingo esingeqile 6 cm;
abazingeli (kuphela uma imibhalo ukugunyazwa);
abalingisi izikhali kwanoma yiluphi uhlobo, kuhlanganise imimese.
Lapho esingeqile blade yabo obuphelele 10 cm, siyadingeka ukuze bathole imvume, okuyinto icacisa injongo isihloko. Kulokhu, isinqumo ekutheni ummese emthwalweni indiza anikezwe kuzoncika emakethe, oyinikezayo abasebenzi sezindiza.
idatha Document kufanele sitholakale endaweni lapho uthola ummese. Uma uke wathola njengesipho, kuyodingeka ukucela donor ukuxazulula inkinga amaphepha kuyimfuneko. Kungenjalo, isikhumbuzo uyakuphuma endlini.
Uma kwakukhona izinsolo - uma libhekisela izikhali abandayo, ubuchwepheshe eyengeziwe izobanjelwa, lapho indoda ummese ibekwe endaweni isitoreji ekhethekile. Lokhu kusho ukulahlekelwa isikhathi nomzamo ukuba ngichazele izisebenzi zalapha, ngakho kufanele anakekele le nkinga kusengaphambili.
Uma ummese liyingxenye izingubo wezwe noma isikhumbuzo, ke kungaba kwenziwe indiza. I imfuneko lokhu ukuthola nomsizi wakhe ngesikhathi isikhathi indiza.
Uma ummese kuthiwa kubangelwa steel ezibandayo
Uma ukhetha ukuthatha ummese indiza, okuzokwenza nakanjani abangele abasebenzi izinsolo sezindiza, kumele bathobele imithetho elandelayo.
Okokuqala, kudingeka unakekele imibhalo ngale ndaba. Ngaphandle amaphepha ngokufanele eqinisekisiwe, umbuzo ukuthi baphathe ummese e wemithwalo izindiza akuyona ngisho nokuzihlupha ukuzibuza. Irisidi kwemibhalo ngale ndaba kuphambili ezinhlelweni zikaHulumeni.
Ngakho, uma isitokwe iphepha, isinyathelo esilandelayo kufanele kube ukuba banakekele icala. Noma yimuphi ummese, ngaphandle ekhishini, ipeni kanye foldable, kumele Unamekwe nge ukulethwa kwemithwalo. Kulesi simo kufanele elinama eqinile, okuyinto akufaki therethrough ukudlula ukudla. Lokhu kuyoba inzuzo wanezela esivuna udaba noma ngabe ummese emthwalweni indiza ngokubeka.
Kodwa kufanele wazi ukuthi ngisho noma ngabe unazo zonke amaphepha ayedingeka ukuthutha into wathi ngensingo esingeqile 10 cm, kungcono ukuxwayisa abasebenzi be-yezindiza ngenhloso yawo Mthatheni flying. Kungcono uma wenza lokhu ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuhamba.
On luhlolo, kuyatuseka ukufika amahora ambalwa ngaphambi check-in. Ngakho, wena zisindise kusukela kokuhlupheka elihlobene ne imizwa mayelana isikhathi sokuhamba. Ngaphezu kwalokho, le ndlela yokuziphatha ngeke ukukholisa amasiko izikhulu ngokungabi bikho izikimu emthethweni kungxenye yakho, ukuthi kuyoba inzuzo yakho eyengeziwe.
Imikhawulo ukungenisa kanye ukuthekelisa
Ezibuza ukuthi kungenzeka ukubamba ummese isemithwalweni kundiza, odinga ukukwazi mayelana imikhawulo abeke amanye amazwe ukuze yokuthekelisa noma yokungenisa izinto ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, ngokomthetho Russian, insimu sinqatshiwe ukuthekelisa imimese izinto ezinenzuzo kwezobuciko noma zomlando. Lokhu kungenziwa kuphela uma izimvume iphakethe, eqinisekisiwe ezingeni wombuso.
A iziphathimandla yaseKhupro uvinjelwe ukungenisa imimese alo nge izingidi, kanye nanoma yikuphi izinto esika nhlangothi zombili.
Ngakho-ke, lapho sasihlose ukuya kwelinye izwe, wena kumelwe uzijwayeze suschestvyuschimi kulesi sihloko enqabela, Ukusungula State. Ngakho, wena zisindise kusukela kokuhlupheka ezingadingekile futhi singathandeki ezihlobene nohambo.
Egoqekayo ummese isemithwalweni indiza ngeke kubangele izinkinga ku ingxenye abasebenzi kwesikhumulo sezindiza. Enye into, uma unesifiso hamba nayo ukuze salon. Nokho, ngenxa yalokhu kukhona ezinye amaphuzu akuvumela ukundlula ukwenqatshelwa jikelele.
Kuze kube manje, imimese alo beze imiklamo eziningi ezahlukene nosayizi. Abakwazi ibonakale sengathi i-lipstick noma insingo, amakhadi epulasitiki ngaphezulu akukho. Izinto ezinjalo kungenziwa kuphela ukutholwa wokuhlola ngokucophelela umuntu, ngakho-ke, wanquma ukuthatha ukuba salon, wena cishe ukuze uthole imibuzo eyengeziwe.
Nokho, nakuba kukhona kungenzeka ukugwema umthetho, nawu umbuzo, kungani-ke? Akunakwenzeka ukuthi ngesikhathi indiza kukhona esiphuthumayo ezifana ukusika okuthile, ngoba konke ukudla wakhonza, ikhumbula lula abagibeli.
Njengoba ukusonga, pocketknife isemithwalweni indiza lungekho ngaphansi kokuvinjelwa. Kungaba yini ngokuphepha ayifake ipotimende nihambe phambi boarding. Uma ukudla akuyona ezingaphezu kuka 6 cm, ungazama hamba nayo ukuze salon, kodwa kuzokwenza imibuzo eminingi, futhi isikhathi esengeziwe ngesikhathi sokuhlolwa. Ngakho, uma ukwazi ukuthi ummese emthwalweni indiza efakwa icala lakho, kuba lula kakhulu ukubeka khona, ngaleyo ndlela engashiyi yena uthuthuva.
Ngokusekelwe imithetho umgibeli womgwaqo, thatha ummese akuyona akuvumelekile. Ngakho uma unquma uyithenga njengoba isikhumbuzo kuleli zwe impi noma, kunalokho, bephethe ke umuntu njengesipho, ayikho imikhawulo provozke. Vele khumbula onjani ummese ukukhipha amaphepha adingekayo uma kunesidingo.
Othile ngokuphazamisa ezinjalo kungase kubonakale engadingekile, futhi sinquma ukwenza ngaphandle kwakhe. Kodwa kunabantu ziyazithanda imimese, lokuqoqa kubo kusukela neqoqo. Futhi uma aphathe lokhu, nakanjani, ngeke siyeke isidingo sokulungiselela iphakethe kwemibhalo, futhi ukuhlolwa esingezelelweko zokutshala. Futhi uma uthatha into wathi njengesipho umuntu nomdlandla, ukwazisa kwakhe iyobe iwufanele yonke imizamo yenu.
Ngakho impendulo yombuzo ophathelene nokuthi ummese emthwalweni indiza ukubeka - omuhle. Kungase kuphakame ezinye izinkinga uma ufuna ukuletha amyisa gumbi, futhi uma isandla phezu emthwalweni - bunikezwa imithetho futhi akwephuli imithetho abagibeli yezindiza.
Ezizwakalayo ukubuyisela umnqamulajuqu aphuthelwe ukufaka isikhalazo
Indlela ukwandisa ifonti kukhompyutha okumbalwa?
Jam ulamula ikhasi: zokupheka elula bonke izikhathi